We She Me: Junk လင်မယား
Ko Paw - 4/3/09, 7:11 PM
ဟား….ဟား….ပိုင်ချက်ဗျာ။ ဒီမှာလည်း မဒမ်ပေါကို ဘီယာတိုက်စည်းရုံးထားရတယ်။ ကိုယ်သောက်ချင်ပြီဆိုရင် “ချစ်လေးရေ…. ဒီနေ့ညနေ ဆယ်လီဘရိတ် (Celebrate) လုပ်လိုက်ကြရအောင်ဟေ့” ဆိုရင်… နှစ်ခါ မပြောရဘူး…ဟီးဟီး။
Phyo Evergreen - 4/3/09, 7:53 PM
၆လဗိုက်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကိုး.. .. အပြောကလည်းကောင်းတယ်နော်.. ဖိတ်ဖူး ဖိတ်ဖူး. လေးစားပါတယ်.. သင်တန်းဖွင့်ဖြစ်ရင်ပြောပါ..လာတက်ပါမယ်..။
sin dan lar - 4/3/09, 8:17 PM
စာတွေ စိပ်စိပ်ဖတ်ရလို့ ဝမ်းသာပါ၏။
ဇနိ - 4/3/09, 8:57 PM
ခေါင်းစဉ်က တမျိုးနဲ့ စိတ်ဝင်စာစရာ ကောင်းနေသလို အမအကျင့်ဖတ်ရတာလည်း ဂွတ်တယ်. အဲဒီအကျင့်ရှိနေတော့ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဈေးကဘယ်လောက်ဆိုတာ သိရတာပေါ့
ဗိုက်ကြီးပူမှာ စိုးလို့ဆိုပြီး အမက ဗိုက်ကြောလိမ်မဆွဲဘူးလား ကိုအန်ဒီ..
Phyo Maw - 4/3/09, 9:03 PM
အော် ပြောအားရှိတော့ ပြောကြပါ ပြောကြပါ။
board တောင် လုပ်ထားတယ်ဆိုပဲ။
တစ်ကိုယ်တည်းသမား တွေကျတော့ ဘာ mail လာလာ အရင်ဆုံး ph bill နဲ့ အင်တာနက်bill ရှာရတဲ့ဘ၀ ပါ။
JulyDream - 4/3/09, 11:28 PM
သြော် ဒီဗိုက် တရားခံက သူကို...
Junk food ပြောတာပါ။ တခြား မတွေးကြပါနဲ့။
Kay - 4/4/09, 12:36 AM
ဘလော့ဂျာ သူမ ကိုပြောလိုက်ပါ။ ဒီမှာ အဖော်ရှိတယ်လို့။း)
ကျမကတော့..အကုန်မဖတ်ဘူး..စာတိုက်ဗုံးဖွင့်ပြီးတာနဲ့..target တို့ kmart တို့ priceline တို့ တခါတည်း ရွေးပြီး ကျန်တာကို အိမ်ရှေ့က..ဗုံးထဲ တခါတည်း ထဲ့ခဲ့တာ။
အသိ အမ တယောက်ဆို..သူ့အိမ်က..ဆေးရုံဝန်ထမ်းအိမ် ဆိုတော့..အဲဒါမျိုးတွေ မလာလို့ ၀မ်းနဲပြီး...လိုက်တောင် ရှာနေရတယ်။း)
ThuHninSee - 4/4/09, 3:00 AM
တစ်ခါတစ်လေ ဖတ်ရတာပျော်တယ်။ couponလေးတွေပေးရင် ဖြတ်သိမ်းထားရတာအမော၊
Anonymous - 4/4/09, 3:16 AM
I heard from one of my friends saying that there isaBurmese restaurant name "Pagan" in Sydney. Is it true? Have you been there?
If you did, would you mind writing your dining experience there? We've never been to Australia yet but hopefully can be there foravisit in the near future. Just keep our fingers cross right now. Thanks!
Moe Cho Thinn - 4/4/09, 9:14 AM
ကိုအန်ဒီက ညီမကိုကျတော့ ဈေးချမှ တဲ့။ ညီမခမျာ အသည်းအသန် မှတ်ထားပြီး ကူပွန်ရှာရတယ်၊ သူ့ Junk food ကျတော့ ပြန်ပြောင်း အောက်မေ့တာ ဆိုပဲ။ တတ်လဲ တတ်နိုင်ပါပေ့..
တို့လဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဆိုင်ရဲ့ ဒစ်စကောင့် ကူပွန်ဆို သိမ်းထားပြီး သုံးရတယ်။ တခါတလေ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ cash မရှိဘဲ ကူပွန်တွေချည်း ပွထ နေပါရောလား။ :)
ပုံရိပ် / Pon Yate - 4/4/09, 1:55 PM
ကိုအန်ဒီက KFC ကြိုက်လို့များ မဒမ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို KFC မှာစခဲ့သလား။
nyimuyar - 4/5/09, 3:02 AM
Yeah Bro! :D I also like Junk Mail (adv from vendor) my favourite one is discount cupon, escpecially from Buger King :D :P
nyimuyar - 4/5/09, 3:10 AM
I'm not from Au. but I just share info.
Bagan Restaurent is nice one and famous amoung Burmese ppl around Sydney. If I'm not wrong, they move to new place at the beginning of 2006, near Strathfield Stn. Sorry Ko Andy :D
TTSweet - 4/5/09, 9:07 AM
နေစဉ်လာဖတ်ပါသည်။ ကွန့်မန့်မပေးပဲ တိတ်တဆိတ်အားပေနေတာကြာပါပြီ။
Phyo Maw - 4/5/09, 1:24 PM
အကိုရေ ဒီ post နာမည် ခုတုံးလုပ်ပြီး ရေးဖြစ်ပါသည်။
သဘောထားကြီးကြီးဖြင့်သာ ဆက်သဘောထားကြီးပေးပါ။ :P
khin oo may - 4/5/09, 7:18 PM
ကိုကိုကလည်း ကောင်မလေးတွေ အမြဲကြည့်တယ။် ခြေဆောင့်လို့ရှိရင် မင်းငယ်ငယ်တု့းကနဲ့တူလို့ပါကွာတဲ့။
khin oo may - 4/5/09, 7:20 PM
တို့က ကေအက်ဖစီနဲ့ ဘာဂါကြောငြာ discount တွေကို အမြဲသိမိးတာ.။ ဆိုင် ရောက်တဲု့နေ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှ မပါဘူး။ဘယ်ပါမလဲ ပိုက်ဆံအိတ်က ဟိုဟာလဲလိုက် ဒီဟာလဲလိုက်နဲ့ကိုး။
မိုးကောင်းသူ - 4/6/09, 10:50 AM
ကိုအန်ဒီ ကျွန်မလဲ အစ်မလို အကျင့်ရှိတယ်။ ဟီးဟီး မ၀ယ်လဲ ဟိုဖတ် ဒီဖတ် လုပ်တယ်။
khin oo may - 5/30/09, 11:57 PM